Translate adbreviata from Latin to Xhosa - MyMemory
Results for adbreviata translation from Latin to Xhosa
ecce non est adbreviata manus Domini ut salvare nequeat neque adgravata est auris eius ut non exaudia
Yabonani, isandla sikaYehova asisifutshane, ukuba singasindisi; nendlebe yakhe ayinzima, ukuba ingevi.
Kuba nangona bathe baba ngangentlabathi yaselwandle abantu bakho, Sirayeli, kobuya amasalela odwa kubo; ukupheliswa kumisiwe kwagqitywa, kukhukula ubulungisa.
Yini na ukuba ndifike, kungekho mntu? ndibize, kungabikho usabelayo? Sifutshane kakhulu na isandla sam ukuba singakhululi? Akakho na kum amandla okuhlangula? Yabonani, ngokukhalima kwam ndomisa ulwandle, imilambo ndiyenze intlango; ziyabola iintlanzi zayo, ngokuba kungekho manzi, ziyafa kukunxanwa;
i wandered lonely as a cloud (English>Tagalog)je sue (French>English)reine (French>Maori)ano ang kahulugan ng maragdag (Tagalog>English)lidostas (English>German)kalavum katru mara (English>Tamil)jy moet nie slapgat wees nie (Afrikaans>Zulu)gall (Polish>French)russian rpnbet (Russian>English)datenquellenansicht (German>French)parang wala lang sa kanila (Tagalog>English)musta meaning (Tagalog>English)none of my business (English>Hindi)aaj ka din bahut acha tha yaadgaar rahega (Hindi>English)di ko sukat akalain (Tagalog>English)futuna (English>Polish)khatarnak (Hindi>English)nibandh in marathi onm mazi aaiea (English>Hindi)intentio obliqua (Latin>Spanish)tum dar gayi kya (Hindi>English)forensic (English>Tagalog)bar poisson (French>Italian)regnum dei intra vos est (Latin>English)projektionslithographie (German>English)setefi numero verde (Italian>English)